Izizinda Zedatha Yendawo YaseGuatemala - I-Geofumadas
Spatial Idatha Umthangala ngoba Guatemala
Meyi, 2009 Geospatial - GIS, -Google Earth / Amamephu, I-GvSIG, Innovations, Ukuphathwa Land
I-Prototype Infrastructure Data Infrastructure yeGuatemala, elungiselelwa uNobhala Jikelele wezokuHlelwa nokuHlelwa koMongameli we-SEGEPLAN, iyathakazelisa.
Sibonile kwividiyo yesethulo kaMoisés Poyatos noWalter Girón we-SITIMI ku-4tas. izinsuku ze-gvSIG; ekupheleni kwesethulo, bakhulume ukuthi ama-IDE ayenesihloko esishisayo eGuatemala kodwa kuze kube yimanje ayengabonanga lutho esidlangalaleni. Manje baye bakwenza ngokusebenzisa uhlu lweposi le-gvSIG futhi ngicabanga ukuthi kufanelekile ukuqaphela ukuthi ngumsebenzi omuhle oqala nje, nakuba uJean-Roch Lebeau engitshele kancane ngakho.
I-SEGEPLAN ihlose ngaphakathi kwendawo entsha Umthetho Wokuphathwa Komhlaba ukugqugquzela ukuthuthukiswa kwezizinda zokwaziswa kwedatha eGuatemala, okuthakazelisayo ukuthi kulokhu bacabangela ngokucophelela i-Free Software. Lezi zindlela zokusetshenziswa:
I-Postgre (i-POSTGIS yesimo sezwe)
i-gvSIG yokwakha izikripthi zesevisi zendawo
I-Apache yesiphakeli sewebhu
I-Mapserver njenge-server ye-Maps
I-Mapbender njengeklayenti elincane.
futhi Ukushicilelwa kwe-GEONETWORK Metadata Module kuqhubeka.
Lokhu kuyigugu kakhulu futhi kubhekisela kahle esifundeni saseMelika Ephakathi lapho ezinye izinhlelo zokusebenza banakho hlala, hhayi kuphela okushiwo ukutshalwa kwezimali kwesofthiwe yokuthengisa kodwa ukunambitheka kwezindinganiso ze-OGC. Ukuze ubone ukuthi uhlelo lusebenza kanjani:
Akakaze abhapathizwe ngegama elimnika ubunikazi benkampani, sicabanga ukuthi uzoba yingxenye yeSinit; ngoba izinga lesibonakaliso liyikheli elixhumanisayo onalo manje, http://ide.segeplan.gob.gt/ , khona-ke ufaka igama lomsebenzisi nephasiwedi "ide" futhi ngaleyo ndlela unayo imininingwane yobuciko.
Lapha phakathi kwedatha ekhonjwe ungakhetha ama-emboss, ama-orthophotos aphezulu kanye neminyango. Uma ungqimba ukhethwa ungakhetha izendlalelo ezitholakalayo futhi ngezansi amanye amathebhu wezinganekwane, uprinte futhi useshe.
Kuzo izithombe ezingaphezulu kunezici eziyisisekelo zokufinyelela nokuthunyelwa kodwa kukhona okunye okuthakazelisayo njengokulayisha kwezingxenye wms:
Ngalesi simo bazoba:
Engeza i-wms kusuka ohlwini oluhlungiwe **
Lungisa i-wms. **
Bonisa ulwazi mayelana nama-wms
Okwamanje, labo abamakwe nge-asterisk babe nephutha lohlelo ngoba badluliselwa endaweni yangakini hhayi kwiseva yewebhu. Futhi ayinakho ukulungiswa kokubhalisa kwezinhlamvu ezingavumeli ukubona kahle incwadi ñ "engeza".
Londoloza ifayela njengokuqukethwe kwemephu lewebhu
Layisha umongo wefayili yewebhu
Yenza ngokuzenzakalelayo usayizi wokuthunyelwa
Xhuma kusuka ku-Google Earth
Uhlelo lunikeza ithuba lokuxhuma kwedatha noma i-wfs noma i-wms; ngakho-ke noma yiluphi uhlelo olusekela amasevisi ajwayelekile we-OGC lungabambelela kuso (gvSIG, ArcGIS, I-AutoDesk Civil 3D, Bentley Map, ezininginingi I-GIS, Cadcorp, Njll)
Ake sibone ukuthi, isibonelo, izinhlelo ezifana ne-Google Earth zingadluliselwa ohlelweni:
Sizofaka "ukungeza, ukugqwaziswa kwesithombe", bese ukhetha ithebhu "yokuvuselela" futhi lapho kukhokhethwa "i-wms parameters". Bese ungeza i-url:
ISICELO = GetMap & SERVICE = I-WMS & LAYERS = Omasipala,
Departamentos_850, Portafolio_Areas.shp, Imizimba yamanzi, Izihloko
I-Departamentales_800, i-Rios_200, Imigwaqo, imizila
I-Asphalted_850 & STYLES = ,,,,,,, & SRS = EPSG: 42500 & BBOX = 420673.5340388007,
I-1610754.0839506174,466326.4659611993,1642245.9160493826 & WIDTH =
893 & HEIGHT = 616 & FORMAT = isithombe / png & BGCOLOR = 0xffffff & TRANSPARENT =
I-TRUE & EXCEPTIONS = isicelo / vnd.ogc.se_inimage
Lokhu kungatholakala kumakheli ahlukene kusendlalelo se-mapbender metadata (kusuka inkinobho ye-orange). Kukhona ama-url amaningi wezinye izendlalelo ezitholakalayo.
Uma isetshenzisiwe, uhlelo luvumela ukukhetha ukuthi yiziphi izendlalelo esifuna ukuzibona nokuhleleka
Ukwengeza, ngincoma ukuthi ubuke ngoba kukhona okuningi okuzobonisa kulolu phrojekthi.
Autodesk Bentley Systems Google Earth I-GvSIG OS GIS ezininginingi mapserver shp
Thumela Previous«Langaphambilini Uthando ngezikhathi ze-Twitter
Post Next Ubuchwepheshe: izinkampani ziyahamba, izinkampani zizaOlandelayo "
Izimpendulo ze-7 ku "Izizinda Zedatha Yendawo YeGuatemala"
Njengamanje ukuthuthukiswa kwalolu hlelo lokusebenza oluhle, okuncane kufana nalokho okushiwo lokhu kubuyekezwa.
Bond Nelson uthi:
Esikwenzile ukunciphisa umthwalo we-30 sec kuya ku-9 sec approx kwakuwukwenza ukubuka konke esikalini esingafani futhi kungasebenzisi ama-mosaic njengoba besenza manje sikhonza ama-ortos ngamanye njalo ngezinqubo ze-Tilingatte
Byron Bobadilla uthi:
Kusukela ekuqaleni kwe-IDE eGuatemala ngu-secretariat wokuhlela nokuhlela kobuongameli, kwenziwa izinguquko eziningana, manje kukhona isigaba sezinsizakalo zemephu noma i-WMS, amavidiyo wokuthi ungaxhumana kanjani nalezi zinsizakalo, nesethulo esivuselelwe ngokuphelele imidwebo, i-IDE entsha inolwazi oluvela ezikhungweni ezihlukahlukene ezifana ne-MAGA, IGN, INE, njll. Konke lokhu ku http://ide.segeplan.gob.gt
Ngiye ngahlola, futhi ukubonakala kwezithombe kubonakala sengathi kuyashesha kakhulu.
Kukhona okungahambisani okunye kuthebula lekhodi nge-accents
Walter Giron uthi:
esikwenzile ukunciphisa umthwalo we-30 sec kuya ku-9 sec approx kwakuwukwenza ukubuka konke esikalini esingafani futhi kungasebenzisi ama-mosaic njengoba besenza manje sikhonza ama-ortos ngamanye ahlala nezinqubo zokufayila
Yebo, ngicabanga ukuthi i-Tilecache iyindlela yokuphuma, kufanele futhi sibheke ezinye izixazululo zeMetacarta njenge-Open Layers.
Umsebenzi omuhle kakhulu futhi uhle kakhulu ukuhlolwa kwakho okusheshayo.
Namuhla ngicabange nge-tilecache ukusheshisa ama-orthophotos. (isibonisi se-tilecache)
Ingabe isebenza kuphela nge-geoserver noma ingahle isetshenziswe ku-mapserver?
Ku-IDE yase-Argentina basebenzisa i-Landsat futhi liphuza ukulanda.